Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose. – Calamada.com
Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
calamada August 17, 2018 2 min read
Weeraradaan oo shalay ka dhacay deegaanno ka tirsan WI Sh Hoose ayaa waxaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeyn Ciidamo isku jira Mareykan, Kuffaarta Africaanta, iyo maleeshiyaad Murtadiin ah, kuwaasi oo ka soo ambabaxay degmada Afgooye, kuna sii jeeday deegaanka Shalanbood oo ka tirsan Sh Hoose .
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa ilaa 4 weerar oo kamiinno ah udhigay kolonyada Cadowga, iyadoona khasaarro xooggan uu gaaray kolanyada iyo Ciidamadii saarnaa.
Weerarka koobaad, ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Muuri , oo aan sidaasi kaga fogeen degmada Afgooye, iyadoona Mujaahidiinta ay weerarkaasi ku gubeen gaari nuuca Booyadda loo yaqaanno oo ay wateen Cadowga .
Weerarka Labaad, ayaa isna ka dhacay, lambar lexdan, iyadoona sidoo kale weerarka 3aad-na uu ka dhacay tuullada Ceelwareegow loo yaqaanno oo ka tirsan Sh Hoose .
Howlgalka 4aad oo isaguna ahaa kamiin, ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Shalanbood, weerarkaasai oo ahaa mid aad u xooggan ayaa khasaaro culus lagu gaar siiyay Kolanyadii la beegsaday .
Sida ay noo xaqiijiyeen Saraakiisha Ciidamada Mujaahidiinta, weerarka 4aad, waxay Mujaahidiintu ku gubeen gaari nuuca Cabdi-bilaha loo yaqaanno, kaasi oo ay wateen gaallada iyo murtadiinta la beegsaday.
Weeraradii shalay ka dhacay qeybo ka mid ah WI Sh Hoose, ayaa noqonaya kuwii ugu xoogganaa ee todobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay WI Sh Hoose oo ku can ah beegsashada gaallada iyo murtadiinta .
Weeraradaani ayaa ayaa imaanaya , xili Jabhada WI Sh Hoose ay sii xoojisay howlgallada ka dhanka ah Ciidamada Kuffaarta Africaanta, iyo maleeshiyaadka Murtadiinta, kuwaasi oo inta badan dhaca xiliyada ay marayaan deegaannada ay Cadowaga ku soo duullay ee ka tirsan WI SH Hoose .
Previous: Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus Iyo Nadaafada Deegaanka.
Next: Qaraxyo Ka Kala Dhacay Duleedyada Balcad Iyo Shalambood.